Mee, 2018 | Otu Di na Nwunye
Mee 28, 2018 + inspirational, omenala, Nhazi njem
Olee Ụdị Njem Ị Hụrụ n'Anya?
Otu n'ime ihe ndị na-abịa mgbe niile na "ndị na-eme njem" dị ka ndị na-ede blọgụ na-agagharị bụ ibu ọrụ n'eziokwu, n'agbanyeghị isiokwu ahụ. Ọ bụrụ na anyị na-akọ akụkọ, anyị na-atụ anya na ị ga-achọ ịnụ akụkọ ahụ dum. Ihe ọma, ihe ọjọọ, ma ọ bụ ihe jọrọ njọ - anyị anọgidewo na-eme nke ahụ. N'ihi ya, anyị na-akọrọ ụfọdụ echiche ndị na-adịghị amasị ebe ndị mmadụ hụrụ n'anya, ma ... GỤKWUO
Mee 12, 2018 + Nri na ihe ọṅụṅụ, France, French, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka
Steak au Poivre bụ mfe French uzommeputa na-agwakọta abụọ nkịtị French Efrata - nnukwu beef na butter! Ọ bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma na-esi na steak, nke dị mfe iji dọpụ apụ, ọ ga-abụkwa ihe ruru ọkara otu awa. Ihe kachasị bụ otu ị ga - esi mechaa Steak Au Poivre, ma ọ bụ eziokwu ọ bụla steak. Mgbe nri, ka ya zuo ike! 10 nkeji bụ nkwanye tupu ... GỤKWUO
Mee 5, 2018 + Florida, Ozi ndị a, North America, Outdoors, United States
Ihe kacha mma ime na Key West, FL
Ndepụta ọrụ ime ihe na Key West bụ ihe na-adịghị agwụ agwụ, ma ọ dịghị ebe ka mma ịmalite karịa karịa mmiri dị mma. Ile anya na map ga-agwa gị ihe kpatara nke a. N'ịbụ onye eziokwu 'Greatest Hits' gbara gburugburu nke oke mmiri nke ụwa, Key West jupụtara n'ụdị ihe omume mmiri ... GỤKWUO
Mee 5, 2018 + Africa, Europe, French Guiana, Ozi ndị a, Namibia, New Zealand, South America, Nhazi njem
Gbanyụọ Ụzọ Ndị Na-adịghị Echeta Iji Tụlee Ijere Ezumike a
Anyị niile maara ụdị mmasị nke France, Brazil, England na US na-enye ndị njem nleta ohere ịbanye na ezumike nke ndụ. Ma olee maka mba ndị a na-elegharakarị anya? Taa, anyị ga-eleba anya na mba ise dị n'okpuru ala bụ ndị bara uru ilele oge okpomọkụ a. Guiana Guiana Enwere ezigbo ohere ị nụtụbeghị na French Guiana. Mgbe ị ... GỤKWUO